လာမညျ့နှရောသီတှငျ လဗောကူဆငျမှ ကိုငျးလျဟာဗကျဇျ ထှကျမညျ…. သို့သျော…….. – Central Online News
လာမညျ့နှရောသီတှငျ လဗောကူဆငျမှ ကိုငျးလျဟာဗကျဇျ ထှကျမညျ…. သို့သျော……..
March 15, 2020 admin Facebook 0
လဗောကူဆငျအသငျး၏ ကှငျးလယျကွယျပှငျ့ ကစားသမား ကိုငျးလျဟာဗကျဇျဟာ လာမညျ့နှရောသီမှာ ဂြာမနျမွမှေ ထှကျသှားဖို့ ပွငျဆငျနကွေောငျး သိရပါတယျ။ အသကျ ၂၀ အရှယျဟာ ဥရောပရဲ့ကွယျပှငျ့ထိပျတနျးကစားသမားထဲမှာပါဝငျနတေဲ့ ဟာဗကျဇျဟာ ယခုရာသီမှာ ၁၀ ဂိုးအထိသှငျးယူထားပွီးဖွဈပါတယျ။ ဟာဗကျဇျကို ပရီးမီးယားလိဂျ ကလပျမြားဖွဈသညျ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျနှငျ့ လီဗာပူးလျတို့က ချေါယူဖို့ ဦးဆောငျနပေါတယျ။ လဗောကူဆငျရဲ့ နညျးပွဖွဈသူ ပီတာဘော့ဇျက သူ့ရဲ့ ကှငျးလယျလူ ဟာဗကျဇျဟာ လဗောကူဆငျကို ထှကျခှာဖို့ နီးစပျနကွေောငျး ဝနျခံသှားခဲ့ပါတယျ။ သို့သျော ဟာဗကျဇျကို ပေါဈေးပဲဈေးဖွငျ့ လကျလှတျသှားမှာမဟုတျကွောငျး တပါတညျးပွောခဲ့ပါတယျ။
“ကိုငျးလျက အသကျ ၂၀ ရှိပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ ဒီရာသီဟာ သူ့အတှကျ ဘှနျဒကျလီဂါ ၄ ရာသီမွောကျဖွဈပါတယျ။ သူနဲ့ ပတျသတျပွီး လူအမြားက ပွောကွဆိုနကွေပါတယျ။ ဂြာမနီမှာ ရှိတဲ့သူတိုငျးက သူ့ကို ကလေးပါရမီရှငျလို့ မွငျနကွေတယျ။ အာခငျြမွို့ကနထှေကျလာခဲ့ပွီးတော့ အသကျ ၈ နှဈကတညျးက ဒီကိုရောကျနတောပါ။ အတျောလေးတျောတဲ့ ခြာတိတျလေးပဲ။ ဉာဏျကောငျးတယျ၊ ပွီးတော့ ဒီကလေးက စန်ဒယားလညျးတီးတယျ။ ကြှနျတျောတို့က သူ့သူငယျခငျြး ဂြူလီယနျ့ဘရနျ့ကို ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဒေ့ါမှနျဆီကိုရောငျးခဲ့တယျ။ ဟာဗကျဇျက ဒီနောကျပိုငျးမှာ မကျြစိကစြရာကောငျးတဲ့ ကစားသမားဖွဈလာတယျ”
“ဆောငျးရာသီ အပွောငျးအရှတေု့နျးကဆိုရငျ သူ့ကို ချေါခငျြတဲ့ အသငျးတှအေမြားကွီး လာခဲ့တယျ။ ကြှနျတျောတို့ ကိုလုံးနဲ့ ဒါဘီပှဲစဉျကို ရှုံးခဲ့သလို၊ နောကျ ၃ ရကျအကွာမှာ ဟာသာဘာလငျနဲ့ပှဲကိုလညျး အရေးနိမျ့ခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ဟာ သူ့ကို လာမယျ့ နှရောသီလောကျထိပဲ ထိနျးထားနိုငျလိမျ့မယျ။ ပွောငျးရှကွေ့ေးကတော့ အနညျးဆုံး ယူရိုသနျး ၁၀၀ လောကျဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ကြှနျတျောအခုပွောနရေငျကို ယူရိုသနျး ၁၀၀ မက တနျအုံးမှာပါ” လို့ ပီတာဘော့ဇျက ပွောခဲ့ပါတယျ။
လာမည့်နွေရာသီတွင် လေဗာကူဆင်မှ ကိုင်းလ်ဟာဗက်ဇ် ထွက်မည်…. သို့သော်……..
လေဗာကူဆင်အသင်း၏ ကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့် ကစားသမား ကိုင်းလ်ဟာဗက်ဇ်ဟာ လာမည့်နွေရာသီမှာ ဂျာမန်မြေမှ ထွက်သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ အသက် ၂၀ အရွယ်ဟာ ဥရောပရဲ့ကြယ်ပွင့်ထိပ်တန်းကစားသမားထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ ဟာဗက်ဇ်ဟာ ယခုရာသီမှာ ၁၀ ဂိုးအထိသွင်းယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဟာဗက်ဇ်ကို ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်များဖြစ်သည့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နှင့် လီဗာပူးလ်တို့က ခေါ်ယူဖို့ ဦးဆောင်နေပါတယ်။ လေဗာကူဆင်ရဲ့ နည်းပြဖြစ်သူ ပီတာဘော့ဇ်က သူ့ရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဟာဗက်ဇ်ဟာ လေဗာကူဆင်ကို ထွက်ခွာဖို့ နီးစပ်နေကြောင်း ဝန်ခံသွားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ဟာဗက်ဇ်ကို ပေါဈေးပဲဈေးဖြင့် လက်လွှတ်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်း တပါတည်းပြောခဲ့ပါတယ်။
“ကိုင်းလ်က အသက် ၂၀ ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီရာသီဟာ သူ့အတွက် ဘွန်ဒက်လီဂါ ၄ ရာသီမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူအများက ပြောကြဆိုနေကြပါတယ်။ ဂျာမနီမှာ ရှိတဲ့သူတိုင်းက သူ့ကို ကလေးပါရမီရှင်လို့ မြင်နေကြတယ်။ အာချင်မြို့ကနေထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ အသက် ၈ နှစ်ကတည်းက ဒီကိုရောက်နေတာပါ။ အတော်လေးတော်တဲ့ ချာတိတ်လေးပဲ။ ဥာဏ်ကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ ဒီကလေးက စန္ဒယားလည်းတီးတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သူ့သူငယ်ချင်း ဂျူလီယန့်ဘရန့်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဒေ့ါမွန်ဆီကိုရောင်းခဲ့တယ်။ ဟာဗက်ဇ်က ဒီနောက်ပိုင်းမှာ မျက်စိကျစရာကောင်းတဲ့ ကစားသမားဖြစ်လာတယ်”
“ဆောင်းရာသီ အပြောင်းအရွှေ့တုန်းကဆိုရင် သူ့ကို ခေါ်ချင်တဲ့ အသင်းတွေအများကြီး လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုလုံးနဲ့ ဒါဘီပွဲစဉ်ကို ရှုံးခဲ့သလို၊ နောက် ၃ ရက်အကြာမှာ ဟာသာဘာလင်နဲ့ပွဲကိုလည်း အရေးနိမ့်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ သူ့ကို လာမယ့် နွေရာသီလောက်ထိပဲ ထိန်းထားနိုင်လိမ့်မယ်။ ပြောင်းရွှေ့ကြေးကတော့ အနည်းဆုံး ယူရိုသန်း ၁၀၀ လောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်အခုပြောနေရင်ကို ယူရိုသန်း ၁၀၀ မက တန်အုံးမှာပါ” လို့ ပီတာဘော့ဇ်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဘှနျဒကျလီဂါရဲ့ တနျကွေးအမွငျ့ဆုံးကစားသမားအဖွဈ ဦးဆောငျနတေဲ့ ဂဒြေနျဆနျခြို